Nnabata | Law & More B.V. | Eindhoven na Amsterdam
blog » Nrube isi na ngalaba iwu Dutch
Nrube isi na ngalaba iwu Dutch
Ihe mgbu ụrọ dị n'ụka ana - akpọ “nnabata”
Site na ntinye nke Dutch Anti-Money Laundering na Anti-Argrant Financing Act (Wwft) na mgbanwe ndị kemgbe emegoro na Iwu a bịara oge nlezianya. Dị ka aha ahụ na-egosi, Wwft gosipụtara na mwakpo ịkụnye ịchụ ego na mmefu nke iyi ọha egwu. Ọbụghị naanị ụlọ ọrụ ego dị ka ụlọ akụ, ụlọ ọrụ ntinye aka na ụlọ ọrụ inshọransị, kamakwa ndị ọka iwu, ndị ọrụ, ndị na-ahụ maka ego na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ nwere ijide n'aka na ha na-agbaso iwu ndị a. A kọwara usoro a, gụnyere usoro nke ọ dị mkpa ka emee iji gbasoo iwu ndị a, yana okwu izugbe 'nnabata'. Ọ bụrụ na emebi iwu nke Wwft, iwu dị mma nwere ike iso. N’ụhụ ụzọ mbụ, ọchịchị Wwft yiri ihe ezi uche dị na ya, ọ bụghị n’ihi eziokwu ahụ Wwft abụrụla ezigbo ihe mgbu n’ọrụ, na - alụ ọgụ karịa naanị iyi ọha egwu na ndị na - ebuputa ego: njikwa ọma nke azụmahịa mmadụ.
Nnyocha nyocha nke ndị ahịa
Iji gbasoo Wwft, ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha nwere ịme nyocha nke ndị ahịa. A ga-agwa ndị azụmahịa ọ bụla (ezubere) ịzụ ahịa pụrụ iche na ngalaba nyocha ọgụgụ isi nke Dutch. Ọ bụrụ na nsonaazụ nyocha ahụ enyeghị nkọwa ma ọ bụ nghọta ziri ezi ma ọ bụ bụrụ na nyocha ahụ rụtụrụ aka n'ihe ndị megidere iwu ma ọ bụ daa n'etiti ụdị ihe ize ndụ dị n'okpuru Wwft, ụlọ ọrụ ahụ ga-ajụ ọrụ ya. Nyocha onye ahịa chọrọ ka edoe bụ ịkọwa ya nke ọma na onye ọ bụla na-agụ Wwft ga-anọ n'ụdị ahịrịokwu dị ogologo, nkebi ahịrịokwu na mgbagwoju anya. Nke ahụ bụ naanị Iwu ahụ n'onwe ya. Na mgbakwunye, ọtụtụ ndị na-ahụ maka Wwft nyere akwụkwọ Wwft akwụkwọ mgbagwoju anya. Na ngwụcha, ọ bụghị naanị njirimara nke ndị ahịa ọ bụla, ịbụ onye ọ bụla sitere n'okike ma ọ bụ onye iwu kwadoro onye ewezugara mmekọrịta azụmaahịa ma ọ bụ onye a ga-eme azụmahịa, kamakwa njirimara nke ndị nwe uru (s) bara uru ( UBO), ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị gosipụtara (PEPs) yana ndị nnọchite anya onye ahịa chọrọ ka edozie ma mesịa chọpụta. Nkọwa iwu nke okwu ndị ahụ "UBO" na "PEP" na-akọwa n'uju, mana gbadata ndị a. Dịka UBO ga-erite mmadụ okike ọbụla nke na-ejidekarị 25% nke mmasị ụlọ ọrụ, ọ bụghị ịbụ ụlọ ọrụ edepụtara na ngwaahịa ngwaahịa. N ’PEP dị nkenke, ọ bụ onye na-arụ ọrụ a ma ama n’ọhaneze. Oge nyocha onye ahịa ga-esite na nyocha ụlọ ọrụ nyocha ahụ nwere nsogbu dị iche iche. Nchoputa a biara n’ogbe ato: nyocha oru, nyocha di nfe na nyocha siri ike. Iji tọọ ma chọpụta njirimara nke ndị mmadụ niile na ọrụ niile a kpọtụrụ aha, ọtụtụ akwụkwọ dị ma ọ bụ enwere ike ịdị mkpa, dabere n'ụdị nyocha ahụ. Ileba anya na akwụkwọ ndị achọrọ ga-arụpụta nsonaazụ ndị na-anaghị agwụ agwụ: akwụkwọ ikike (paspọtụ) paspọtụ ma ọ bụ kaadị njirimara ndị ọzọ, ihe ndị sitere na Commerlọ Azụmaahịa, isiokwu nke mkpakọrịta, ndekọ ndị nwere oke na nyocha nke ihe ụlọ ọrụ. Maka nyocha siri ike, enwere ike ịchọkwu akwụkwọ kapịpị ego ụgwọ ọrụ, nkwekọrịta ọrụ, nkọwapụta ụgwọ ọnwa na nkwupụta akụ. Ihe ndị a dị n’elu na-ebute ngbanwe nke ilekwasị anya na onye ahịa na ezigbo ọrụ ndị ọrụ, nnukwu nsogbu ndị ọrụ gọọmenti na-akwụ ụgwọ, ụgwọ ọrụ na-efunahụ, na-efufu oge, enwere ike ịnwe iwe ndị ọrụ ụgwọ n'ihi oge a, ọrụ ịkụziri ndị ọrụ N'ihe banyere Wwft, ndị ahịa kpasuru iwe, na karịa egwu niile nke imehie, dịka, nke ikpeazụ mana ọ bụghị opekata mpe, Wwft họọrọ ịkwụ nnukwu ụgwọ ịtụle ọnọdụ dị iche iche na ụlọ ọrụ onwe ha site na ịrụ ọrụ na mmeghe iwu. .
Ntughari: na tiori
Irube isi na-eweta ọtụtụ nsonaazụ nke ọghọm. Nke mbu, mgbe ulo akwukwo akporo ikari ire ahia di iche (nke achutara), ulo akwukwo a nwere ikpe nke onodu aku na uba n'okpuru iwu Dutch (onye omekome). Mgbe agadata na nyocha ndị ahịa, enwere ụfọdụ ihe achọrọ. Institutionlọ ọrụ ahụ ga-ebu ụzọ nwee ike ịme nyocha ahụ. Nke abuo, ndi oru nke ulo akwukwo a gha aghaghi amata mmeghari ohuru. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ anaghị agbaso iwu Wwft, otu n'ime ndị na-ahụ maka nchekwa dị ka Wwft họpụtara nwere ike inye ntaramahụhụ mmụba. Ndị nwe ikike nwekwara ike ịnye iwu nchịkwa, na-adịkarị iche n'etiti ego kacha nke € 10.000 na € 4.000.000, dabere n'ụdị mmejọ ahụ. Agbanyeghị, Wwft abụghị naanị omume na-enye ntaramahụhụ na inye ntaramahụhụ, dịka Iwu Sanctions ('Sanctiewet') nwekwara ike ghara ichefu. Anabatara Iwu Iwu ahụ iji mejuputa mmachi mba ụwa. Ebumnuche nke mmachi bụ iji dozie ụfọdụ omume nke mba, òtù na ndị mmadụ dịka ọmụmaatụ na-emebi iwu mba ụwa ma ọ bụ ikike mmadụ. Dịka mmachi, mmadụ nwere ike iche maka mmachi, mgbochi ego na mgbochi nke ụfọdụ maka mmadụ. Ruo ugbu a, emepụtara ndepụta aha mmado nke gosipụtara mmadụ ma ọ bụ òtù nke gosipụtara (nke nwere ike bụrụ) na-eyi ọha egwu. N'okpuru Iwu Iwu ahụ, ụlọ ọrụ ego ga-ewere usoro nhazi na njikwa iji jide n'aka na ha na-agbaso usoro iwu mmachibido iwu ahụ, na-emezighi nke na-emebi iwu akụ na ụba. Ọzọkwa na nke a, enwere ike ịkwụ ụgwọ ntaramahụhụ ma ọ bụ nzere nchịkwa.
Atọ ghọrọ ihe mere eme?
Nkwupụta sitere n'aka mba ụwa emeela ka ọ pụta ìhè na Netherlands na-eme nke ọma karịa na mbuso iyi ọha egwu na ịchụ ego. Yabụ, kedu ihe nke a pụtara n’ihe metụtara mmanye mmachi ọ bụrụ na enweghị nnabata? Ruo ugbu a, ọtụtụ ndị ọka iwu agbanweela doro anya ma nye ntaramahụhụ dịka ihe ịdọ aka na ntị ma ọ bụ ndị na-enyo enyo. Nke a abụrụkwala okwu maka ọtụtụ ndị na-ede akwụkwọ na ndị na-eme nchọpụta ego. Agbanyeghị, ọ bụghị onye ọ bụla bụ ihe ndabara ahụ ruo ugbu a. Notdebanye aha na nyochaa njirimara nke UBO emeela ka otu ụlọ ọrụ nata nha ruru $ 1,500. Onye na-ahụ maka ụtụ isi natara ntaramahụhụ nke $ 20,000, nke ego nke € 10,000 bụ ihe a chọrọ, maka na-akpachaghị anya na-akọ banyere azụmahịa na-enweghị atụ. O meelarị na ewepụrụ onye ọka iwu na ọnye ọpụpụ n'ọfịs ha. Agbanyeghị, mmachi a siri ike na-abụkarị nsonaazụ nke mmejọ Wwft. Na agbanyeghị, na ata ezigbo ahụ, ịdọ aka na ntị ma ọ bụ nkwusioru apụtaghị na amachibidoghị ya oke. E kwuwerị, a ga-eme ka amachibidoro ọha na eze iwu, na -eme ka ọdịbendị nke “ịkpọ aha na ịma mma”, nke na-agaghị adị mma maka azụmahịa.
Wwft gosipụtara na ọ bụ iwu dị oke mkpa ma dị mgbagwoju anya. Karịsịa nchọpụta ndị ahịa na-ewe ụfọdụ na-eme, nke kachasị na-eme ka elekwasị anya gbanwee azụmaahịa ahụ na - nke kachasị mkpa - onye ahịa, ọnwụ nke oge na ego ma ọ bụghị n'ikpeazụ ka ndị ahịa nwee nkụda mmụọ. Ruo ugbu a, edebela ntaramahụhụ ahụ, agbanyeghị na ọ ga-abụ na iwu ọma ndị a erute nnukwu. Kpọ aha na ịme ihe bụ ihe ọzọ na-enwe ike ịrụ nnukwu ọrụ. Ka o sina dị, ọ dị ka ọ bụrụ na Wwft na-eru ihe mgbaru ọsọ ya, ọ bụ ezie na ụzọ nnabata jupụtara na nsogbu, ugwu nke akwụkwọ, na-atụ egwu mmegwara na ịdọ aka ná ntị.
Ọ bụrụ n’inwe ajụjụ ọ bụla ọzọ ị ga-aza ma ọ bụ kwuo ihe ị gụchara edemede a, nweere onwe gị ịkpọtụrụ mr. Maxim Hodak, onye ọka iwu na Law & More via [email protected] ma obu mr. Tom Meevis, onye ọka iwu na Law & More via [email protected] ma ọ bụ kpọọ anyị na +31 (0) 40-3690680.
Previous Post Na-enweta onyinye na ịntanetị nke gosipụtara na ọ dị mma ịbụ eziokwu…
Next Post Iwu dị na ntinye akwụkwọ elektrọnik na ndekọ ndekọ azụmahịa: otu gọọmentị si eme ihe n'oge ndị a